Yintoni ukhuselo lwepeyinti? -Iinkampani zeendaba-ININGBO CHEM-PLUS kunye neJW FILM
Yintoni ifilimu yokukhusela ipeyinti?
Ngaba uyazi ukuba ifilimu yanamhlanje yokukhusela ipeyinti yemoto yayiqale yaveliswa kwizicelo zomkhosi ezazisukela emva kweMfazwe yaseVietnam?
Ebudeni beminyaka yee-1960, iSebe lezoKhuselo laseUnited States lalineengxaki zerotter yehelikopta kunye nezinye izixhobo zomkhosi ezibuthathaka ezonakaliswe bubutyobo okanye isiqwenga esibhabha.
Oku kubakhuthazile ukuba banxibelelane nenkampani ye-3M ukuze iphuhlise umaleko okhuselayo owawubala kwaye ulula.
Isisombululo sabo yayikukukhulisa ifilimu yokukhusela ipeyinti (okanye ebizwa ngokuba yitape yehelikopta). Isicelo sayo sokuqala sasirhwebelana, ke ngoko sasingajoliswanga ncam ukuba "sibengezele". Ngapha koko, iinguqulelo zokuqala zazibutofotofo ngokumangalisayo-ngokukhanya okucacileyo okunamafu. Kodwa benze umsebenzi obalaseleyo wokukhusela naphi na apho wawusetyenziswa khona.
I-PPF yemoto yanamhlanje iguqukele kwifilimu ekumgangatho ophezulu ye-urethane esetyenziselwa idyasi ephezulu yepeyinti zemoto entsha okanye esele isetyenzisiwe. Itholakala ngemibala emininzi okanye inguqu ecacileyo, kwiinqanaba ezahlukeneyo zobukhulu.
Ifilimu ecacileyo ye-urethane iyamelana kakhulu nokungcola kwe-asidi kunye nokubola, ukubonelela ngokhuseleko kwi-bug splatter, i-droppings yeentaka, iidipozithi zeeminerali, imvula ene-asidi, kunye nokunye. Izinto ezizodwa zikwanceda ukunciphisa i-oxidization ngenxa yokuvezwa kakhulu lilanga okanye kukukhanya kwe-UV.
Uluhlu oluphezulu lwe-PPF luqulathe into yeplastikhi ye-elastomeric enceda umbandela ugcine ubume bendalo nje ukuba wolulwe okanye wasetyenziswa. Eli nqaku livumela i-PPF ukuba "iziphilise" xa ukukrwela okukhanyayo kwenzeka.
Ifakwa njani iPaint Protection Film?
Uyigcina njani ngokufanelekileyo ifilimu yokukhusela ipeyinti?